Txt Iweghachite: Olee naghachi TXT Files on Max / Windows
> Resource> Naghachi> TXT Iweghachite: Olee naghachi TXT Files na Mac / Windows
Olee otú m nwere Naghachi ehichapụ TXT faịlụ site My Mac?
Ndewo, m nwere ederede faịlụ nke e dere ọtụtụ ihe dị mkpa ọmụma. M accidently ihichapụ ya si m Mac, ma emeghị m pụtara ime ya. Ugbu a, m chọrọ n'ezie na ederede faịlụ azụ. Bụ n'ebe ọ bụla ụzọ naghachi m ehichapụ txt faịlụ?
E nwere ihe abụọ ngwọta naghachi txt faịlụ: ịrụzi a rụrụ arụ txt faịlụ ma ọ bụ naghachi a ehichapụ ọ bụ furu efu ederede faịlụ. Naghachi ehichapụ ọ bụ furu efu txt faịlụ, ị pụrụ nanị iji txt mgbake software naghachi ha.
Wondershare Data Recovery for Mac Ma ọ bụ Wondershare Data Recovery maka Windows ọrụ bụ ngwa ngwa na mma-txt mgbake omume n'ihi na ị na-agbake ehichapụ txt faịlụ site na kọmputa gị, mpụga ike mbanye, nchekwa ngwaọrụ SD kaadị na ndị ọzọ na nchekwa ngwaọrụ.
Ị nwere ike ibudata a ikpe mbipute nke Wondershare Data Recovery na-amalite mgbake. Nọmalị ma ọ bụrụ na gị furu efu txt faịlụ adịghị e overwritten ọ bụ mebiri emebi, ị nwere ike naghachi ha.
Igosi ehichapụ ma ọ bụ Echefuola TXT File Iweghachite na 3 Nzọụkwụ
N'ebe a, anyị na-agbalị na Wondershare Data Recovery for Mac (n'ihi na Mac ọrụ). Ọ bụrụ na ị na-eji a Windows kọmputa, biko na-Windows version ma na-agụ Wondershare Data Recovery (n'ihi na Windows) ọrụ ndu.
Nzọụkwụ 1 Họrọ a Iweghachite ọnọdụ naghachi Your TXT Files
Mgbe wụnye na-agba ọsọ usoro ihe omume, ị ga-enwe 4 mgbake ụdịdị ịhọrọ site na, dị nnọọ ka ị pụrụ ịhụ site oyiyi n'okpuru. All 4 ụdịdị nwere kpọmkwem expatiations, ị nwere ike họrọ ihe ọ bụla mode ị chọrọ iji dị ka mkpirikpi ntuziaka.
Naghachi ehichapụ ọ bụ furu efu txt faịlụ, ị nwere ike họrọ "Echefuola File Iweghachite" mbụ. The mode bụ ọtụtụ ihe ngwa ngwa na-agbake ehichapụ ederede Ọ na-enye ndị mbụ filenames nke gị faịlụ na-ewe obere Ia oge maka ịgụ isiokwu gị na kọmputa.
Cheta na: Ọ bụrụ na a mode adịghị arụ ọrụ nke ọma, i nwere ike ịgbalị "Raw Iweghachite" na ndị ọzọ 2 ụdịdị, ha na-achọ ogologo oge scanning.
Nzọụkwụ 2 Họrọ Logical Drive ka iṅomi
Na nke a nzọụkwụ, ike draịva na mpụga nchekwa ngwaọrụ niile ga-ahụrụ site a usoro. Ị dị nnọọ mkpa iji họrọ ike mbanye ebe ị furu efu txt faịlụ ka iṅomi.
Rịba ama: Ọ bụrụ na ị na-aga na-agbake txt faịlụ site na mpụga nchekwa na ngwaọrụ, biko họrọ ya mbanye akwụkwọ ozi.
Nzọụkwụ 3 Preview Nkọwa nke Lost Files na-agbapụta ha na Mac
N'ebe a, anyị na-abịa ikpeazụ nzọụkwụ. Mgbe ike okokụre, hụrụ faịlụ ga-edepụtara ke nchekwa ma ọ bụ site categoriy Ịnwere ike ihuchalu aha nke hụrụ txt faịlụ ka ego ma ha bụ ndị faịlụ na ị chọrọ iji weghachite ma ọ bụ.
Na njedebe, ị dị nnọọ mkpa iji họrọ txt faịlụ ị chọrọ iji naghachi wee pịa "Naghachi" zọpụta ha na gị na Mac
Rịba ama: N'ihi na nchekwa nke mgbake, biko adịghị ịzọpụta natara faịlụ azụ mbụ ezi uche mbanye ma ọ bụ mpụga nchekwa na ngwaọrụ.
The Ịkwaga iOS App: Nke a bụ ụzọ kasị mma ịkwaga iOS ngwaọrụ?